IMonado, ipulatifomu yomthombo ovulekile yamadivayisi weqiniso wangempela | Kusuka kuLinux
Okuhle | | Imidlalo, Izaziso
Muva nje kwamenyezelwa ukushicilelwa kokwethulwa kokuqala kwephrojekthi ye- "Monado", okuyi ipulatifomu entsha ehlose ukudala ukuqaliswa okuvulekile kwezinga le-OpenXR, echaza i-API yendawo yonke ukudala izinhlelo zokusebenza ezingokoqobo nezingathandwa kwabathelisi esikubona, kanye neqoqo lezendlalelo zokusebenzisana namakhompiyutha afaka izici zamadivayisi athile.
Izinga lalilungiswa yiKhortos Consortium, ebuye ithuthukise amazinga afana ne-OpenGL, i-OpenCL neVulkan.
1 Mayelana noMonado
1.1 Mayelana nenguqulo yokuqala ye-Monado
Kuhle inikeza isikhathi sokusebenza esihambisana ngokugcwele nezidingo ze-OpenXR, engasetshenziselwa ukuhlela umsebenzi ngeqiniso elibonakalayo nelingathandwa kwabathelisi esikubona kuma-Smartphones, amaphilisi, i-PC kanye nanoma iyiphi enye idivayisi, kusukela iphrojekthi ithuthukisa izinhlelo ezingaphansi eziyisisekelo, okulandelayo:
Injini yokubona kwendawo: obhekene nokulandelwa kwento, ukuchazwa kwendawo, ukwakhiwa kabusha kwemeshi, ukuqashelwa kwesenzo, ukulandelwa kwamehlo.
Injini yokulandela umlingiswa: Umsebenzi wawo ukulawula i-gyroscopic stabilizer, ukubikezela kokuhamba, abalawuli, ukulandela umkhondo we-optical ngekhamera, ukulandelela isikhundla ngokususelwa kudatha evela kusigqoko se-VR.
Isiphakeli esiyinhlanganisela: iphatha imodi yokukhipha eqondile, ukudluliswa kwevidiyo, ukulungiswa kwelensi, ukwakheka, ukubumbela indawo yokusebenza ukuze isebenze ngasikhathi sinye nezinhlelo zokusebenza eziningi.
Injini yokusebenzisana- Lokhu kubhekele ukulingiswa kwezinqubo zomzimba, iqoqo lamawijethi nekhithi yamathuluzi wezinhlelo zokusebenza ezingokoqobo.
Okokusebenza: unesibopho sokulinganisa imishini, ukusungulwa kwemikhawulo yokuhamba, phakathi kwezinye izinto.
Unjanil UMonado yisikhathi sokuqala sokusebenza se-OpenXR se-GNU / Linux futhi ngithemba ukuqhuba ukuthuthukiswa komthombo ovulekile we-XR ecosystem futhi sinikeze ngezisekelo eziyisisekelo zokwakha zabathengisi bedivayisi ukukhomba ipulatifomu ye-GNU / Linux.
Izici eziphambili okuvelele, ukutholakala kwabashayeli bamahedisethi wangempela we-HDK (I-OSVR Hacker Kit Kit) ne-PlayStation VR HMD, kanye nabalawuli I-PlayStation Move neRazor Hydra.
Ngaphezu kokunikeza i- kungenzeka ukusebenzisa imishini ehambelana nephrojekthi ye-OpenHMD futhi uhlinzeke ngomshayeli wezingilazi ezingokoqobo ze-North Star.
Tambien ineqoqo lemithetho ye-udev yokulungiselela ukufinyelela kwedivayisi I-VR ngaphandle kokuthola ukugunyazwa kwezimpande, kanye nomshayeli wohlelo lokulandela umkhondo we-Intel RealSense T265.
Futhi iseva eyinhlanganisela elungele ukusetshenziswa esekela okukhiphayo okuqondile kudivayisi, ngokudlula isiphakeli se-X sohlelo. Ama-shader ahlinzekelwa i-Vive ne-Panotools kanye nokuxhaswa kwezendlalelo zokuqagela.
Ezinye izici zayo yilezi:
Izingxenye zokulandelela ukunyakaza ngohlaka lokuhlunga nokusakaza ividiyo.
Uhlelo lokulandela ngomlingiswa olunamadigri ayisithupha enkululeko (i-6DoF, phambili / emuva, phezulu / phansi, kwesobunxele / kwesokudla, i-yaw, iphimbo, iroli) yabalawuli bePSVR nePS Move.
Amamojula wokuhlanganiswa nama-API wehluzo le-Vulkan ne-OpenGL.
Imodi engenasikrini (engenakhanda).
Phatha ukuxhumana kwendawo namaphuzu wokubuka.
Ukusekelwa okuyisisekelo kokuvumelanisa kozimele nokufakwa kolwazi (izenzo).
Mayelana nenguqulo yokuqala ye-Monado
Okwamanje inguqulo yokuqala ibhekwa njengokuhlola futhi kuhloselwe ukuqala abathuthukisi abajwayelene nengxenyekazi.
Esimweni samanje kwephrojekthi, iMonado ivumela ukudala izinhlelo zokusebenza nokulandelela ukujikeleza kumadivayisi ahambisanayo usebenzisa i-OpenHMD futhi inikeza amandla okubonisa ngqo okukhiphayo kumadivayisi weqiniso wangempela ngokudlula isitaki sehluzo sohlelo lokusebenza.
Ikhodi yephrojekthi ibhalwe ngo-C futhi isatshalaliswa ngaphansi kwe-GPL-compliant Boost 1.0 License, esekwe kumalayisense we-BSD ne-MIT, kepha ayidingi ukushiwo lapho umsebenzi ophuma kokunye usatshalaliswa ngendlela kanambambili.
Okwamanje ipulatifomu isekela kuphela iLinux futhi ukuhambisana nezinye izinhlelo zokusebenza kulindeleke ngokuzayo.
Ekugcineni, Uma ufuna ukwazi kabanzi ngeMonado, Ungahlola imininingwane, futhi ukwazi ukufinyelela ikhodi yomthombo yalokhu, kusuka kuwebhusayithi yayo esemthethweni.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » IMonado, ipulatifomu yomthombo ovulekile yamadivayisi weqiniso wangempela
Ngifuna i-vr engcono ye-linux bamane nje bane-cv1 futhi i-valve engakaqedwa ishiya ingalo nomlenze. I-Htc izimpilo ngokusobala ayinazo izinhloso eziningi ngakho ngibuze ku-twitter. Kufanele babe nezicelo zonjiniyela ukuze baqale bacabange ngakho.
Okunye futhi ukuthi bambalwa labo abafuna intuthuko ku-linux labo abasebenzisa i-vr ezindaweni ezivaliwe kakhulu kanti okunye ukuthi bambalwa abasebenzisi abafuna amapulatifomu avaliwe futhi sesivele siyayazi indwangu yalokho!